Faayinaansii Ijaaraah - Oromia International Bank
Faayinaansiin hijiraa tajaajila liqaan kanneen wal qabatan(leasing) baankichi qabeenyaalee kiraaf ooluu danda’an ajaja maamilaan ykn kaka’umsa ofii isaatii bituun kan kireessu yeroo ta’u baankiin qabeenya kireessu akkaataa waliigaltee dura mallatteesseen akka waliigalteen kiraa xumurameen ykn gidduutti kireefataaf gurgurtaan ykn kennaadhaan dabarsuu danda’a. maamilli maashinoota(konkolaattota) kiraan yeroo fudhatu gatii kiraa isaaniitti dabalee hanga ta’e kaffalaa xumura irratti qabeenya isaa kan dhuunfaa isaa godhachuu kan dandeessisu Hijiraa Faayinaansingii jedhama.
Haaluma wal fakkaatuun baankichi meeshaaleen yeroon kiraa isaanii xumurame abbaan qabenyummaan meeshichaa kireeffataaf hin darbu yoo ta’e adeemsi abbaan qabeenyummaa meeshichaa gara baankiitti ittiin jijjiiramu Ijiraa jedhama.
Hojiirra oolmaa Ijiraa
Guutummaa guutuuttu seera sheriyaan kan deggerame tajaajila liqaa dhala irraa bilisaati.
Baankichi yeroo kiraadhaaf ifatti taa’eef qabeenyasaa ni kireessa.
Akkaataan kaffaltii kiraa isaa ji’a ji’aan ykn akkaataa walii galtee godhameen kaffalama.
Akkaataan itti fayyadama meeshaa kireeffamuu waliigaltee keessatti ifatti taa’a.
Yeroo kiraa miidhama meeshaa irra ga’uu maluuf karaa ifa ta’een waliigaltee keessa taa’uu qaba.
Qaamni kireeffatu suphaa yeroo hojii mudatuuf qabeenyichaaf itti gaafatamummaa ni fudhata.
Kireefataan akkaataa waliigaltee kiraa yeroo isaa eegee raawwachuu yoo baate ykn yoo ture dhala dhalaa(compound interest) hin kaffalu, garuu adabbii guddaa qabaata.
Qabeenyichi ykn meeshichi yeroon kiraa isaa yeroo xumuramu qabeenyummaan qabeenyichaa kireefataaf hin dabarfamu.
Tajaajila faayinaansii kanaaf baankichi wabii gaafachuu danda’a.